Ulungelelwaniso lweCandelo leBrand yokuSebenzisa ukuThengisa
Ngomthamo omkhulu wedatha eyenziweyo kumajelo amaninzi entengiso, iimveliso zinikwa umngeni wokuququzelela kunye nokusebenzisa iiasethi zedatha elungileyo ukukhulisa ukusebenza kwejelo lomnqamlezo. Ukuqonda ngcono abaphulaphuli ekujoliswe kubo, ukuqhuba ukuthengisa ngakumbi, kunye nokunciphisa inkunkuma yentengiso, kuya kufuneka lungelelanisa isahlulo sebhendi yakho ngokusebenza kwedijithali kunye nokwenza ingxelo.
Kuya kufuneka ulungelelanise ngoba bathenga kunye Ngubani othenga (icandelo labaphulaphuli) kwi Intoni (amava) kunye njani (ukwenziwa kwedijithali) ukuze yonke imizamo yakho ikwi iphepha elinye.
Esona sizathu siphambili solungelelwaniso kukunyusa ukusebenza ngokuchanekileyo kunye nokuvumelanisa iinzame zakho ukuze into nganye isebenze ngokunxibelelana nenye. Ukwazi ukuba ngabaphi abantu ekujoliswe kubo kugqiba ukuba ngawaphi amanyathelo okuthengisa ekufuneka uwasebenzisile ukubabandakanya, eya kuthi ikukhokelele kulwazi olufanelekileyo lokuphucula icandelo lakho. Umjikelo onxulumene kunye nonxibelelwano.
Ulwahlulo luqondisa isicwangciso sakho
Ulwahlulo luqinisekisa ukuba umyalezo olungileyo-> ufikelela kumthengi olungileyo-> ngexesha elifanelekileyo. Kukwasebenza kakhulu ngokufanelekileyo kuqoqosho kunentengiso enkulu. Ukwahlulahlula abasebenzisi abenza imisebenzi ephezulu uyakonyusa ukubandakanyeka nabasebenzisi bangoku ukuqhuba ixabiso ngakumbi kubaphulaphuli bakho. Ukulungelelanisa isahlulo sakho nesicwangciso sokuvula kubalulekile.
Ngokufumana ukuqonda kokuziphatha kwabathengi uneengcinga ezifunekayo ukonyusa uguquko. Ukwahlula sisixhobo esikunceda uhlalutye ulungelelwaniso lwabathengi ababelana ngeempawu ezifanayo.
Ngokujolisa kumacandelo anezona ndawo ziphakamileyo zokuzibandakanya, ungaphuhlisa isicwangciso esisebenzayo sokuthengisa esisebenza ngcono iimfuno zabathengi kwaye ekugqibeleni sonyuse ukuguqulwa.
Izinto ezi-5 zamacandelo asebenza kakuhle kufuneka zibe
Ngqi niseka - esekwe kubungakanani, amandla okuthenga, kunye neprofayili yecandelo
Kakhulu - ubunzima obunzima obunenzuzo
Iyafikeleleka - enokufikeleleka ngokulula
Umahluko - yahlukile kwabanye
Iyasebenza -Onza ukuba iinkqubo / amaphulo afanelekileyo aphuhliswe
Ukwahlula iimarike ngokufanelekileyo, kuya kufuneka uwahlule ngokwamaqela ahlukeneyo aneemfuno ezithile, iimpawu, okanye isimilo esidinga iimveliso ezahlukeneyo okanye imixube yentengiso. Isitshixo sokuvula amacandelo abaphulaphuli owachongileyo kuyo yonke inkqubo yendalo yedijithali.
Icandelo lakho ekujoliswe kulo kufuneka lenziwe kwisiseko se
Ngabaphi abathengi abaya kuphendula ngokufanelekileyo kwiimpawu zakho
Yeyiphi eyona idilesi yomthengi kwiimfuno kunye nenkuthazo
Apho abathengi bakumjikelo wokuthenga
Iimpawu ezingenakulinganiswa ezidibanisa nee-KPIs ezifana nobukhulu kunye nesabelo semarike
Ukunyanzeliswa kwesazisi (sephrofayili)
Ukusebenza ekujoliseni (ngokusekwe kwimali, izibonelelo, kunye nokuqwalaselwa okusebenzayo) kunye nokukhula okungaguquguqukiyo kokukhula kwecandelo
Kuya kufuneka uqonde indlela yokuziphatha yokuthenga kwicandelo ngalinye kwaye uphuhlise iprofayili yabathengi (ngophando kunye nokulandela umkhondo wewebhusayithi ezityebileyo zedatha).
Kuya kufuneka uqale ngophando lwe-DNA yophawu lokuvavanya amandla / ubuthathaka boluphawu
Icandelo lokuchonga amaqela ekujoliswe kuwo
Chonga iithagethi zokuqala nezesekondari
Ukuseka indawo yokubeka uphawu
Sebenzisa ithagethi ukuze unxibelelane nophawu lwentengiso ngendlela enentsingiselo
Nje ukuba wenze njalo yahlula abaphulaphuli bakho ekujoliswe kubo, Kuya kufuneka ukuba ukhangele abachaphazeli, oonozakuzaku bebhrendi, abavangeli, kunye nabameli. Usebenzisa aba bantu okanye amaqela, unokunyusa ukusebenza ngokukuko kwe-brand kunye nokunyusa amazinga okuphendula.
Ukwahlulahlula kuqhuba ukusebenza ngokukuko
Ukwandisa ukusebenza kakuhle kolawulo lwebrand kunye nokufezekisa / ukugcina inzuzo yakho yokhuphiswano kunye nokunyusa ukuguqulwa, kuya kufuneka ulungelelanise ukwahlulwa kweempawu, ukuthumela imiyalezo kunye nokwenza kusebenze.
Ukwahlulahlulahlula ngempumelelo uphawu lwakho kunye nokulungelelanisa nokonyusa kokuvula:
Phezulu kokuqonda kwengqondo
Sebenzisa i-CRM yakho kunye nemithombo yedatha yomntu wesithathu, ungahlulahlula abaphulaphuli bakho kwaye uncede ucwangcise ukusebenza. Ngokuchonga abona bathengi bakho, ungagxila kwimithombo yeendaba efanelekileyo ukufikelela kubo kunye nomyalezo olungileyo wokuzibandakanya nabo.
Xa ucwangcisa imisebenzi yakho yentengiso kuya kufuneka ugcine isahlulo engqondweni ukuze ubone ukuba zeziphi izinto ezinokubandakanya kumxube wakho wentengiso. Umxube olungileyo wemisebenzi yokuthengisa kunye nezithuthi zihambelana kakhulu nokuziphatha kwabaphulaphuli ekujoliswe kubo.
Ulwahlulo lwentengiso kunye nokwakha isindululo sexabiso ezahlukileyo zezona zixhobo zinamandla kwezentengiso zokukhokela isicwangciso sentengiso. Icacisa ngokucacileyo ukuba yeyiphi iithagethi zabathengi eziza kwenza eyona mbuyekezo iphambili kuguquko kwaye inike umbono olungileyo wokuba ungafikelela njani kwaye ubandakanyeke kubo.
Nje ukuba uqikelele ulwahlulo, unokulungelelanisa nokusebenza. Ukwenza kusebenze uphawu lwebrand kubandakanya ukuzisa uphawu kwindawo yentengiso. Imalunga nokuhambisa ukukhula kwebranti ngokusebenzisa onke amathuba esiteshi ukunxibelelana nabathengi kunye nokwenza nzulu amava / ubudlelwane kunye negama lakho. Kufuneke u:
Guqula iindlela zokwenza uphawu zibe zizicwangciso zomsebenzi ezintsha
Phuhlisa unxibelelwano lwentengiso olusondeleyo nabathengi
Phumeza iinkqubo zokuvula abathengi
Ukuqhuba kwegama lokuqhuba kunye nobukho besitishi
Ukubeka iliso kwinkqubela phambili yentengiso kunye nokusebenza kwegama
Ukuseka uncamathiselo lweemvakalelo okanye olunengqondo phakathi kwabathengi kunye negama lakho ukukhuthaza uthethathethwano kubaluleke kakhulu. Oku kulungelelaniswe nendlela oyila ngayo imbono kunye nokuziphatha ngokunxulumene nenkampani yakho.
Ukunika ingxelo ngeBrand kukunika ukuqonda okungcono kwicandelo
Ukwenza ingxelo elungelelaniswe necandelo kunceda ukubonelela ngokuqonda okufunekayo ukwazisa inkqubo yentengiso kunye nokukhokela uphuhliso lwephulo.
Ukulungelelanisa amacandelo ekunikeni ingxelo, kukuvumela ukuba ubone ukuba ngawaphi amacandelo anenzuzo enkulu ukuze ukwazi ukwandisa ukusebenza kokujolisa. Esi sicwangciso-qhinga sikubonelela ngomfanekiso ochanekileyo wokuba ngawaphi amacandelo athile anegalelo kwi-ROI yakho, ezifuna ingqwalaselo enkulu kunye nezixhobo ezininzi, nezokuphelisa.
Ukulungelelaniswa kulingana nokusebenza
Umda wakho wokhuphiswano uxhomekeke ekufumaneni abaphulaphuli abafanelekileyo kwiimveliso / iinkonzo zakho, emva koko ufumane umyalezo olungileyo kubo.
Ukwahlula sisixhobo sokunceda ukufezekisa oku, kodwa ngaphandle kokuba kujolise kumxube wokuthengisa olungileyo, uchitha ukusebenza ngokukuko kunye nokusika kwimida yakho. Ivenkile enkulu yedatha onayo kufuneka isetyenziselwe ukumisela ukuba ngubani oza kuthetha naye kunye nendlela yokufikelela kubo ngokufanelekileyo ukuqhuba ukuzibandakanya. Nje ukuba unayo ulungelelwaniso lwesahluko kulungiselelo, kwaye ujongiwe kwingxelo esebenzayo ngokulinganayo ukuze ufumane ukuqonda, emva koko ekugqibeleni unalo ulwazi oludingayo ukuze ulungelelanise uguquko.
tags: nkoleloulungelelanisoUlwaziidatha yebhidiAbathunywa begamaulwahlulo lophawuithuba elihle lokhuphiswanoguqukaijelo elinqamlezileyoukwenziwa kwedijithaliukuqhuba ukuthengisaUkusebenza kakuhleabavangeliyandisa utshintshoAbathinteliukufanaurhwebointengisoUkulungiswaintengiso ebunjiweyothengaukunciphisa inkunkumaisahlulo
Kufanelekile ukuba uMgwebi abe ngumongameli we Sq1, njengoko ebekwinqanaba eliphambili lokurhweba kwidijithali kwikhondo lakhe lonke lomsebenzi. Ngaphambi kokujoyina i-Sq1, wayengumququzeleli kunye ne-CEO ye-arhente yedijithali ephumeleleyo eTexas. Ujaji wanceda iarhente yakhe yedijithali ukuba ikhule uluhlu lwabathengi bayo ukuba babandakanye iinkampani ezinje ngeAmerican Airlines, Mountain Dew, Pier 1 Imports, Dillard's kunye neRadio Shack. Oyena mntu wamkela ibhaso leComdex “leShishini eliNcinci loNyaka”, (yenye yezona ntengiso zinkulu kunye nemiboniso yeekhompyuter kwihlabathi), iJaji ibiyinkokeli kwezentengiso zedijithali / kwimithombo yeendaba, amava omsebenzisi kunye noyilo lwewebhu kunye nophuhliso ngaphezulu kweshumi leminyaka.